Semalt Expert Anogadzira Pamarudzi Ezvinhu Zvinyorwa Zvitsva zve SEO
Hazvingave zvisina kunaka kutaura kuti mazwi echinyorwa anoita basa rinokosha mune zvauri kuita kana webhusaiti zvakarongerwa mumitsva yekutsvaga injini.
Kune mhando dzakasiyana dzemashoko makuru, asi dzakajairika zvakakurukurwa pasi apa naRoss Barber, Mutengi Wekubudirira Kwevatereji Semalt .
Mhedhi-miswe mhete mazwi ndeaya mazwi anonyanya kuve nemashoko mashomanana, mabhesi, uye zvimwe. Izvo zvinowedzera uye zvinopfurikidza nekureba kwemaswe keywords uye inogona kushandiswa mumhando dzose dzezvinyorwa. Somuenzaniso, kana mumwe munhu ari kunyora pamusoro pechirwere cheshu, anogona kunyora shoko rokuti "shangu" kana "shangu" kazhinji mumagwaro acho. Kana iwe uchida kuwana nzvimbo yakakwirira paGoogle, unofanira kunge uchishandisa mutsara mutsara mazwi munyaya dzako dzose. Ruzhinji rwemashoko makuru aya anovimbisa kuunza yakakwirira yemotokari nokuti kutendeuka kwavo kuwandisa kwakaderera pane zvakakosha mazwi.
Kusiyana nemisungo mikuru misi, mazwi ekupedzisira-misi miviri anosanganisira mazwi maviri kusvika matatu uye anonyanya kujeka uye mararamiro anotarisana. Semuenzaniso, "zvishongo zvepiniki zvevakadzi" ndeyedu-mutsara waro uye inogona kushandiswa nemabhandi kana shangu dzekutengesa paIndaneti. Kana mumwe munhu akaisa mukati mekutsvaga injini, zvirokwazvo achaona mapeji ako kana iwe wakanyatsotsanangura ichi chinhu chikuru. Kana ichifananidzwa nemashoko mashoma-muswe, mazwi akareba-muswe anoshandiswa nyore, uye anogona kugoverwa mumitauro yakasiyana yemigumisiro iri nani. Iko kutendeuka kwamazana emidhi-misi mikuru inowedzera kuwedzera kana iwe uchivashandisa nenzira yezvimedu, mitsara, uye zvimwe..Iva nechokwadi chekuti usashandise izwi rimwe chete mune zvimwe zvinodarika zviviri zviduku sezvo zvinogona kuderedza nhamba yemuwonesi wewebsite yako.
Akashandurwa mazwi makuru ndeaya mazwi makuru anogona kana asina mazita emabhizimisi ako kana marashi. Kana mumwe munhu ari kutsvaga cheki seApple, acharapa iyo injini yekutsvaga yeGoogle, uye kana iwe wakarongedza izwi rakadaro rakafanana, kune mikana yokuti webhusaiti yako ionekwe kwaari. Kana iwe uchida kuwana hukuru hwakanaka mumigumisiro yemagetsi ekutsvaga, unofanira kushandisa mazita ezvakagadzirwa zvemashoko sezvo vachiwedzera kukudzwa kwechikwata pakati pevashanyi. Iva nechokwadi chekuti unosanganisira mitsara uye zvinyorwa zvine zita rako, uye chinangwa chako chinofanira kunge chiri kuwana nhamba imwe chete mumitambo yekutsvaga injini.
Hasi-mazita emazwi makuru
Mazita asina mazita ezvinyorwa haana mazita ebhizimisi rako. Vanoshuva kukwezva vanhu vakawanda kune mazita enyu uye vanofanira kushandiswa pamagariro evanhu mune nhamba huru. Izvo zvakasiyana zvachose nemashoko akanyorwa mazita uye inofanira kuve yakarongeka zvakanaka kuitira kuti vanhu vakawanda vawedzere kusvika kune webhusaiti yako.
Aya mazwi makuru anozivikanwawo se geographical keywords kana geo keywords. Iine mazita ekugara nemitsara inobatsira. Somuenzaniso, unogona kunyora "shangu dzvuku dzomuLondon." Pano uri kugovera vaverengi vako nepfungwa yokuti kambani yako iri muLondon uye inobata muzvitsvuku zvitsvuku kune varume, vakadzi, nevana.
Nyaya dzinokosha mazwi
Nyaya dzemashoko emakore ndeaya mazwi anonyanya kushandiswa panguva yeKrisimasi, Halloween, Easter kana imwe nguva. Zvinowanikwa zviri nyore mumazuva iwayo uye zvinogona kuva nechokwadi chokuti iwe uwedzere kutengesa paIndaneti.
Vanhu vakasiyana-siyana vanoita zvikanganiso zvepelenzi kana kuchinja maitiro pavanopinda mitsara mukutsvaga mabhokisi. Somuenzaniso, vokuAmerica vanyorera "vanodikanwa" apo veEurope neCanada vanoriidza "unofarira." Iwe unogona kutarisa idzi dzisina kukodzera mazwi ekutungamirira motokari dzakawanda kumapeji ako ewebhu Source .